शिक्षा/स्वास्थ्य – Page9– MeroJilla.com
स्तनपान नगराउँदा बालबालिकामा समस्या Wednesday, August 1st, 2018
नारायण अधिकारी ,चितवन– स्तनपान कम गरेका बालबालिकामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता थोरै हुने गरेको बताएका छन् । स्तनपान कम गरेका बालबालिका रोगी हुने गरेको र उनीहरुमा रोगसँग लड्ने क्षमता नहुँदा विभिन्न रोगले छिटो आक्रमण गर्ने गरेको चिकित्सकले बताएका छन् । भरतपुर अस्पतालका वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा युवानिधि बसौलाले बालबालिकालाई आमाले छ महिनासम्म आफ्नै दूध मात्रै..
काठमाडौँ- संसारभर विभिन्न कार्यक्रम गरी आज स्तनपान दिवस मनाइँदै छ । नेपालमा पनि स्तनपानसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी यो दिवसलाई साताव्यापीरुपमा मनाइँदै छ । पछिल्ला वर्षहरुमा हाम्रो देशमा पनि हरेक आमालाई आफ्ना शिशुलाई नियमित रुपमा ६ महिनासम्म स्तनपान गराउन प्रेरित गर्दै एक हप्तासम्म स्तनपान सप्ताह मनाउने गरिएको छ । संसारभर एकदेखि सात अगष्टसम्म मनाइने विश्व..
धाइरिङस्थित स्वास्थ्यचौकीलाई एक लाख सहयोग Tuesday, July 31st, 2018
पर्वत- जलजला गाउँपालिका–७ धाइरिङस्थित स्वास्थ्यचौकी भवन निर्माण गर्न एक ज्येष्ठ नागरिकले रु एक लाख ११ हजार सहयोग गरेका छन् । धाइरिङ घर भई हाल बेनी नगरपालिका– ७ शान्ति टोल बस्दै आएका ९० वर्षीय बोमबहादुर केसीले सो रकम सहयोग गर्नुभएको हो । केसीले मिलनचोक आमा समूहलाई समेत रु दश हजार सहयोग गर्नुभएको उहाँका छोरा शेरबहादुरले जानकारी दिनुभयो । वडाध्यक्ष टुंगनाथ आचार्यका अनुसार..
होसियार ! हार्मोनको गडबडीले पुरुषलाई पनि सताउँछ Monday, July 30th, 2018
–इच्छा गुरुङ हार्मोनको चर्चा हुनासाथ सामन्यतया महिलाको बिषय भन्ने आमधारणा रहेको पाइन्छ । पुरुषमा हुने हार्मोनको गडबडीप्रति धेरैले त्यति वास्ता गरेको पाइदैन । तर पुरुष पनि हार्मोन असन्तुलनको शिकार बनिरहेका हुन्छन् । ३० बर्षभन्दा माथिका पुरुषहरुमा हार्मोनको कमी हुदै जाने गर्दछ । उक्त समयमा उनीहरुमा निराशा, स्वभावमा परिवर्तन, काममा थकान जस्ता समस्या देखिन सक्दछ..
पहिरो पिडितको पिडामा मलम लगाउँदै सांसद गिरी Thursday, July 19th, 2018
पर्वत । पहिरोले घर बगाउँदा घाइते भएका जिल्लाको जलजला गाउँपालिका वडा न ७ धाइरिङका घाइतेहरुलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य पदम गिरीले भेटघाट गरेका छन । पहिरोमा परी घाइते भएका नारायणी आचार्य, भिमलाल आचार्य र तुलसीदेवी आचार्यलाई गिरीले भेटेर सरकारको तर्फबाट घाइतेहरुको उपचारमा कुनै कमी नराख्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका हुन । अविरल बर्षातका कारण रातको समयमा आएको पहिरोका कारण उनीहरु..
काठमाडौं । जुम्लामा अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको अनशन तोडाउन सरकारले बल प्रयोग गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा प्रहरीले आज जुम्ला अस्पतालमा अध्यधिक बल प्रयोग गरेको छ । डाक्टर केसीको पक्षमा हजारौंको संख्यामा जनताहरु उर्लिएका थिए । तर, प्रहरीले प्लाष्टिकको गोली प्रहार गरेका खबरहरु आएका छन् । प्रहरीको गोली लागेर स्वयम् प्रहरी नै सख्त घाईते भएका..
डा. गोविन्द केसीलाई लिन हेलिकोप्टर जुम्लामा, अपहरण शैलीमा नलैजान केसीको चेतावनी
काठमाडौं । जुम्लामा २० दिनदेखि अनशनमा बसेका डा. गोविन्द केसीलाई लिन सरकारले नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर पठाएको छ । हेलिकोप्टर जुम्ला पुगिसकेको छ । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केसीलाई लिन हेलिकोप्टर पठाइएको बताए । बिहीबार बिहान मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । बुधबार बेलुका प्रधानमन्त्रीसहित केही मन्त्रीहरुको बैठकले डा. केसीलाई..
काठमाडौं । अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई काठमाडौं ल्याउन नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर जुम्ला पुगेको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, शिक्षा मन्त्रालयका सचिवसहितको टोली केसीलाई लिन जुम्ला पुगेको हो । डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ((नेकपा) को आग्रहमा सरकारले बुधबार केसीलाई काठमाडौं ल्याउने निर्णय..
कालीगण्डकी एकेडेमी कुश्माले एसइई परिक्षा ०७४ का विद्यार्थीहरुलाई सम्मान र बधाई तथा विदाई ग¥यो
कुश्मा,पर्वत । पर्वतको कुश्मामा अवस्थित कालीगण्डकी एकेडेमी अंग्रेजी आवसिय माध्यमिक विद्यालयले एसइई परिक्षामा सम्मालिन २०७४ का विद्यार्थीहरुलाई सम्मान र बधाई तथा विदाई गरिएको छ । पर्वतको कुश्मामा आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरि विदाईहरुलाई मायाको चिनो प्रदान गरि सम्मान बधाई तथा विदाई गरिएको हो । विद्यालयले २०७४ सालको एसइई परिक्षामा अन्जली पुरी र अनिश बस्नेतले जिपीए ४।००..